प्रकाशित मिति : २०७६, २१ श्रावण मंगलवार १८:०२
नेपालगञ्ज। बाँकेमा नेपालमै पहिलोपटक भूकम्पको पूर्व सूचना दिने ‘सेन्सर’ जडान गरिएको छ । कोहलपुर र बैजनाथ गाउँपालिकामा भूकम्पको पूर्व सूचना दिने ‘सेन्सर’ जडान गरिएको हो । कोहलपुर नगरपालिका कार्यालयमा राखिएको सेन्सर रिमोट कन्ट्रोलको आज नेशनल साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी सेन्टर फर डिजास्टर रिडक्सन (एनसीडीआर) ताइवानका निर्देशक डा. होङ चेङ, कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावत र बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख मानबहादुर रुचाल ठकुरीले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ ।
एनसीडीआर ताइवानको सहयोगमा कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा ६/६ वटा सेन्सर जडान गरिएको हो । एनसीडीआर, ताइवानका निर्देशक डा. चेङले सेन्सरले भूकम्प जानु भन्दा ५० सेकेन्ड अघि नै सेन्सरले सूचना दिने बताउनुभयो । तीन महिना लगाएर सेन्सर जडान गरिएको हो । सेन्सरले भूकम्प जानु पूर्व नै सूचना दिने भएकाले त्यस बारेमा मोबाइल एप्सबाट सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइने कोहलपुर नगरपालिकाकि उप-प्रमुख सन्जु कुमारी चौधरीले बताउनु भयो ।
कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका चुरेको तल्लो भागमा पर्दछन् । यी स्थानीय तह प्राकृतिक हिसावले चुरेसँग जोडिएको र घनाबस्ती भएकाले भविष्यमा आउन सक्ने ठूलो विपद्को जोखिममा रहेको मानिन्छ । कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रको पूर्वपश्चिम राजमार्गको करिव १० किलोमिटर क्षेत्र आसपासलाई भूकम्पीय क्षेत्रका रुपमा हेरिएको छ ।